नेपाल आज | चलाखी चल्दैन अमेरिकामा
चलाखी चल्दैन अमेरिकामा
बिहिबार, १६ साउन २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
‘हिट एन्ड रन’ गरी दुर्घटना स्थलबाट गाडी लिएर सुँइकुच्चा ठोक्ने एकजना भाइ प्रहरीको सर्च अपरेसनबाट समातिएर ८ घन्टाको जेल सजाय भोगि धरौटीमा रिहा भएछन । एकजना चिनेकै सामाजिक अभियन्ताकै सल्लाह बमोजिम दुर्घटनास्थलबाट हिट एन्ड रन गरी गाडी लिएर बत्तिएका रहेछन । जेलबाट छुटेको केही समयमै फोन गरे– ‘दाजु म त बर्बाद भएँ ।’ मैले सोधें के भयो ? उनले सबै कुरा खोले । घटना भएपछि सबैले चिनेका एकजना एनआरएनका अभियन्तालाइ सोधेँ– ‘यस्तो घट्ना भयो के गरौ ?’ ती अभियन्ताले सोधेछन– ‘पुलिस आइसक्यो कि छैन ?’ जवाफ दिएछन– ‘छैन ।’ अनि अर्को गाडी कहाँ छ त ? एक जना बुढी गोरिनी रहिछिन साइडमा गाडी भित्रै छिन । यति सुनेपछि उताबाट सल्लाह आएछ– ‘ए त्यसो भए यताउति हेरेर कुदे हुन्छ । केही फरक पर्दैन ।’ यही सुझावअनुसार भाइ हिट एन्ड रन गरी भागेका रहेछन ।
भएछ के भने अर्कै थर्ड गाडी ड्राइभरले भाइको गाडीको नम्बर प्लेट लिएर प्रहरीलाइ खबर गरिसकेछ । भाइ घर पुग्दा नपुग्दै प्रहरी बत्ती बालेर पछाडि आइसकेछ । भाइले दुई बोतल वियर पनि खाएका रहेछन । माउथ ब्रेथ मेसिनले जाँचेछ । गाडीको साँचो परिवारलाई जिम्मा दिएर प्रहरीले हत्कडी लगाएर उनलाई लगेछ । नाताका मानिसको रोहबरमा धरौटी राखी अदालतको मेजेस्टी अफिसबाट छुटेका रहेछन् ।
उनले थपे– ‘दाजु हजुरलाइ फोन गरौं जस्तो त लागेको थियो । त्यसबेला मलाई दशा लागेको ती अभियन्तालाइ सोध्न पुगेंछु । तिनको सुझाव मान्दा म डुबें । अब के गर्ने होला दाजु ?– मैले सुझाएँ– ‘अब क्रिमिनल डिफेन्स वकिल खोज्नु । एक हप्तामा विभिन्न वकिलहरुले चिठ्ठी पठाउलान । कि त्यो कुर्नु नत्र भने मलाइ भोलि फोन गर्नु । म तिम्रो राज्यको त्यो एरियाको सम्बन्धित वकिलको सूचना लिएर दिउँला ।’ यति भनेर फोन राखें ।
अर्को सचेत हुनुपर्ने कुरा के हो भने यदि अमेरिकी सडकमा गाडी चलाइरहनु भएको छ र तपाईंले अन्य ड्राइभरको गाडी ठोकि दिनुभयो र दुर्घटना गरिदिनु भयो भने जुन ठाउँमा गाडी ठोकियो, त्यही ठाउँमा गाडी मुभ नगरी प्रहरी नआएसम्म बस्नुपर्छ । जब प्रहरी आएर गाडी मुभ गरी साइड लगा भन्छ , त्यसबेला मात्र गाडी मुभ गर्ने यदि गाडी चल्ने अवस्था भएमा । नत्र टो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रहरीले नै टो को सूचना दिनेछ । अर्को गाडी ठोकेर भाग्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन् । यस्तो हिट एन्ड रनले तपाई आपराधिक मुद्दामा जाकिन सक्नुहुन्छ । उस्तै परे तपाईंको ड्राइभर लाइसेन्स निलम्बन भई जेलको पाहुना हुन बेर लाग्ने छैन् ।
अब आयो गलत सल्लाह दिएर अरुलाइ फसाइदिने र अरुलाई डुबाइदिने यस्ता सामाजिक अभियन्ता एनआरएनवालाहरुलाइ के भन्ने ? अनि यिनले नेतृत्व गर्ने संस्था कहाँबाट उँभो लागोस त ? उल्टो सल्लाह दिने, जान्दै नजानेको बिषयमा बठ्याइँ गरी गलत बाटो देखाउनेले संस्था र समाज कतातिर हाँकिरहेका होलान त? प्रत्येकले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अमेरिकामा सचेत हुनुपर्ने अर्को के विषय के हो भने सकेसम्म कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो कार साथीभाइ वा परिवारका सदस्यलाई चलाउन दिनु हुँदैन् । यदि उनीहरु तपाइको अटो इन्सुरेन्समा आवद्ध छैनन भने धेरैले सोच्दछन के होला र ? अन्य ड्राइभर वा अन्य व्यक्तिले चलाएको तपाइँको गाडीले दुर्घटना गर्यो भने अर्को ड्राइभर र उसको अर्थात उनको गाडीको क्षतिको जिम्मेवार तपाईं र तपाईंको इन्सुरेन्स हुनेछ ।
तपाईंको गाडीले अर्को गाडी क्षतविक्षत वा उक्त ड्राइभरलाइ घाइते बनायो भने र तपाईंको गाडीको इन्सुरेन्स लायाबिलिटी मात्र कभरेज पोलिसी छ भने तपाईंको इन्सुरेन्स जिम्मेवार हुनेछ । सबैभन्दा पहिले यस्तो अवस्थामा तपाईंको इन्सुरेन्सले अर्को गाडीको ड्राइभर र गाडीको क्षति त व्यहोरिदिन्छ तर तपाईंको गाडीको ड्यामेजको भार तपाईंको टाउको माथि पर्नेछ तर, तपाईंको गाडीलाइ अर्कोले हानिदिएको अवस्थामा चाहिँ तपाईंमाथि भार पर्ने छैन । उक्त गाडीको इन्सुरेन्स लायाबल हुनेछ ।
तर, तपाईंको साथी वा आफन्त वा परिवारको सदस्यले तपाईंको अनुमतिमा गाडी चलाउँदा हुनसक्ने कुनै पनि दुर्घटनाको आर्थिक एवं कानुनि जिम्मेवारी तपाईंको थाप्लोमा पर्नेछ । ड्राइभरले तपाइको गाडी चलाउँदा फोनमा, टेक्समा वा कुनै पनि ड्राइभिङ्ग डिस्ट्राक्सन हुने काम गरेमा, रक्सी खाएर, औषधि लिएर, लागू औषध प्रयोग गरी गाडी चलाएको अवस्थामा दुर्घटना भएमा तपाईंको इन्सुरेन्सले अर्को गाडी र ड्राइभरको क्षति व्यहोर्ने छैन । यस्तो दायित्व तपाईंको काँधमा आइ लाग्नेछ । यसबाट सबैभन्दा डरलाग्दो र ठूलै दुर्दशा निम्तिने छ तपाईंका लागि । यसबाट हुनसक्ने सबै खाले आर्थिक जिम्मेवारी तपाईंको टाउकोमा मात्र आइलाग्ने छैन, तपाईंको इन्सुरेन्समा आर्थिक भार थपिनेछ । जुन रेकर्डमा समेत जानेछ ।
तर, तपाईंको अनुमति विना गाडी चलाएको रहेछ, तपाईंको गाडी चोरी गाडी चलाउँदा हुनसक्ने कुनै पनि दुर्घटनामा चाहिँ तपाईं जिम्मेवार हुनुहुने छैन । उक्त अवस्थामा स्वयं ड्राइभर नै जिम्मेवार हुनेछ । यदि तपाईंको परिवारका सदस्य वा नजिकको साथीले बारम्बार तपाईंको गाडी चलाउने गरेको छ भने तपाईंको अटो इन्सुरेन्ससंग सम्पर्क गरी लिस्टेड गराउनुहोस । यस्तो अवस्थामा तपाइँ सुरक्षित हुन सक्नुहुनेछ ।
त्यसैले अमेरिकामा आफ्नो हिफाजत आफैंले गर्ने हो । अरुबाट हत्तपत्त कुनै अपेक्षा र विश्वास नगर्नुहोस । आफ्नो नाक काटेर अर्काको आङ्गको भ्वाङ्ग टाल्न थाल्नु भयो भने अन्ततोगत्वा आफैंलाई हानी गर्छ ।
गाडी अमेरिकी सडक